जिवनभर पार्टीकै लागि भनि बाँचेका, पूर्वमाओवादी कमाण्डरले भेरी नदीमा हा’मफालेर आ’त्मह’त्या ! आखिर किन ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/जिवनभर पार्टीकै लागि भनि बाँचेका, पूर्वमाओवादी कमाण्डरले भेरी नदीमा हा’मफालेर आ’त्मह’त्या ! आखिर किन ?
डोल्पा । डोल्पाका एक पूर्वमाओवादी कमाण्डर जसले जिवनभर पार्टीकै लागि बलिदान गरे । आफ्नो भएको सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गरे । आफ्नो यौ’वन पार्टीमा दिएका लोकवहादुर चलाउने ६० वर्षको उमेरमा भेरी नदिमा हा’मफा’लेर आफ्नो जिवन त्यागे । पार्टीलाई नै आफ्नो सारा जिवन सुम्पेका चलाउनेको नि’धनमा पार्टीमा एक शब्द पनि खर्च गरेन । उनको नि’धनमा श्रद्धाञ्जली समेत नदिएर अ’पहेलना गरेको भन्दै पूर्व माओवादी ल’डाकूहरुले दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
पार्टीमा बबरको नामले चिनिएका लोकबहादुर चलाउने आफ्नो त्या’ग र ब’लि’दानीको कुनै कदर नभएपछि रु’ष्ट हुँदै गएका थिए । उनी ति नेता हुन् जसले १९ वर्षअघि २०५८ माघ २ गते सुर्खेतमा जेल ब्रेक गर्ने ब्यक्ति हुन् । त्यतीबेला १५ जना आस्थाका बन्दीहरूले सुर्खेत जेलब्रेक गरेका थिए। माओवादी जनयु’द्धमा सुरुदेखि नै हो’मिएका लोक बहादुर चलाउने (बबर) ले गत बुधवार आफ्नो जीवनलाई सदाका लागि उर्लदो भेरीमा विर्सजन गर्नुका पछाडी उनलाई पार्टीले गरेको वेवास्ता नै थियो ।
जनयु’द्धकाल र त्यसपछि पनि जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रमा कमरेड बबरका नामले चर्चित चलाउनेलाई पार्टीले निकै वेवास्ता गरेको थियो । वृद्ध हुँदै गपछि उनको स्वास्थ्यमा स’मस्या आयो । सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण गरेका कारण उपचार गर्ने पैसा पनि थिएन । पार्टी र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो उपचारका लागि पटक पटक आग्रह गरे । तर उनको आग्रह कसैले सुनेन । चलाउने ज’नयु’द्धमा शुरूदेखि नै संलग्न इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ नेता रहेको उनका यु’द्धकालिन सहकर्मीहरू बताउने गरेका छन् ।
कर्तब्र्यनिष्ट भएर लागेका उनलाई सोही पार्टीले गरेको वेवास्ता नै आफ्नो जिवन त्याग्ने कारण बन्यो । उमेरले पनि वृद्ध भइसकेका चलाउनेले दे’ह त्या’ग गर्नुका पार्टीप्रतिको वितृष्णा र पार्टीले गरेको बेवास्ता प्रमुख कारण रहेको जिल्लाका नेकपाल नेताहरू बताएका छन् । उनको उपचारमा त प्रदेश सरकार र पार्टीले वेवास्ता गर्यो नै नि’धन पछि पनि उनलाई सम्मान गर्न उचित सम्झेन । भेरी नदिमा आफ्नो जिवन समाप्त गरेका चलाउनेको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली समेत ब्यक्त गरिएन । पार्टीले झण्डा समेत ओढाएन । औपचारीक रुमा एउटा शो’क बक्तब्य पनि निकालिएन ।
उनका समकालिनहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रदान्जली दिएपनि पार्टीले आधिकारिक रुपमा श्रद्धान्जलीसम्म नदिएको भन्दै नेकपाकी महिला नेतृ काली चलाउनेले आ’पत्ति जनाएकी छिन्‌। महान यो’द्धाले त्यसरी जिवन त्या;ग गर्दा पनि डोल्पाले एउटा सेतो कागजमा कालो मसी खर्चेर गरेर दुई शब्द कोर्न पनि चाहेन,ु चलाउनेले भनिन्‌, पार्टीलाई विशाल बनाउने उनको योगदानको पार्टीले कदर गरेन । उनले यस वारेमा पार्टी नेतृत्वसंग प्रश्न गर्ने जनाएकी छन् ।
साम्राज्ञीले मेरो इमेजमा धक्का लाग्नेगरी गाली बेइज्जती गरिन त्यसैले, मैले १० करोडको क्षतिपुर्तिको मागसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छु